ပြင်ပ WPC အမှတ်တရဝတ် - တရုတ်ပြင်ပ WPC အမှတ်တရဝတ်ပေးသွင်း, စက်ရုံ -HengSu Edging
Home » ထုတ်ကုန်များ » WPC ပစ္စည်း » WPC အမှတ်တရ Panel များ
ပြင်ပ WPC အမှတ်တရဝတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်ပန်း wpc မြို့ရိုးကိုဝတ်ပျဉ်ပြားရိုးရာသစ်ဝတ်ဖို့အရောင်-တည်ငြိမ်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်, ပြည်တွင်းအသစ်တည်ဆောက်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဝတ်စီမံကိနျးအတှကျစုံလင်သောဖြစ်ကြသည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုသစ်သားနှင့်ပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ရာမှ လုပ်. , ပေါင်းစပ်ဝတ်သိသိသာသာမဆိုအဆောက်အဦး၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟု။ ဒါဟာအားလုံးရာသီဥတုအခြေအနေများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့သင့်အဆောက်အဦများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးခေတ်ပြိုင်ရှာဖွေနေအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု option ကိုပေးသည်။
100% recycle, Eco-friendly, သစ်တောသယံဇာတအရင်းအမြစ်များချွေတာ;
ဘိနပ်မပါသောဖော်ရွေ, Anti-စလစ်, လျော့နည်းလောင်သောအသံနည်းအတိုင်;
က c ° 40 မှအနုတ် 60 ထံမှသင့်လျော်သည့်မိုးလေဝသခံနိုင်ရည်,
install လုပ်ရန်မလွယ်ကူ, စင်ကြယ်သောအနိမ့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်။
အရွယ်: 180x10mm, 150x16mm, 150x20mm, 100x16mm
1 ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတအပြင်ပန်း wpc မြို့ရိုးကိုဝတ်ရှိပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ WPC ခွဲထွက်အဖွဲ့မည်မဟုတ်သောကြောင့်, အတိုင်သို့မဟုတ်မှိန်, ဒါဟာသိသိသာသာပြုပြင်နှင့်အစားထိုး၏ဖြုန်းတီးသံသရာလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ရှိသောဆေးသုတ်, sealers နှင့်အစွန်းအထင်းများမကြာခဏလျှောက်လွှာရှင်းလင်းစေပါတယ်။
2 ။ Will အရောင်အတွက်အပြင်ပန်း wpc မြို့ရိုးကိုဝတ်မှိန်?
ခရမ်းလွန်နှင့်အခြားရာသီဥတုသက်ရောက်မှုထိတွေ့အများစုမှာပစ္စည်းများလည်းညှိုးနွမ်းပါလိမ့်မယ်။ WPC မြို့ရိုးကိုဝတ်ဖြေရှင်းချက်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းနှင့်အတူ Blend ဖြစ်ကြပြီးခရမ်းလွန်-ဟန့်တားဆိုးဆေးမှိန် minimize နှင့်အရောင်အတွက်တသမတ်တည်းထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အားလုံးထုတ်ကုန်အညီအမျှလည်းညှိုးနွမ်းပါလိမ့်မယ်။
3 ။ အဓိက wpc မြို့ရိုးကိုဝတ်တပ်ဆင်ခဆက်စပ်ပစ္စည်းဘာတွေလဲ?
Keel, သံမဏိပန်းကန်, လက်သည်း, ချဲ့ထွင်ဝက်အူ, အစွန်းစကတ်။
4 ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမှတင်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်စျေးပေါရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်ရှိပါသလား?
သေးငယ်တဲ့အမိန့်အဘို့, အကောင်းဆုံးရှိစေသတည်း။ ထိုအအမြောက်အများအမိန့်အဘို့, ပင်လယ်သင်္ဘောလမ်းသည်အကောင်းဆုံးပေမယ့်အချိန်အများကြီးယူကြလိမ့်မည်ကိုဖော်ပြ။ အရေးပေါ်အမိန့်, ကြှနျုပျတို့လေဆိပ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောမိတ်ဖက်ဖို့လေမှတဆင့်အကြံပြုသည်သင်၏တံခါးပေးပို့ပါ။
5 ။ ပြင်ပ wpc မြို့ရိုးကိုဝတ်တစ်ခုအာမခံရှိပါသလား
ဟုတ်ကဲ့! တစ် 25-တစ်နှစ်တာလီမိတက်လူနေထိုင်ရာအာမခံ, 10-တစ်နှစ်တာလီမိတက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အာမခံ, 25-တစ်နှစ်တာလီမိတက်အစွန်းအထင်းအာမခံရှိပါသည်။